कसरी रहन्छ जुम्ल्याहा गर्भ ? – Health Post Nepal
२०७८ कार्तिक २ गते १३:३१
बच्चा जन्मनु खुसीको कुरा हो। बच्चाकै कारण घरमा खुसी छाउने गर्छ। अझ बढि खुसी त त्यो सयमा हुन्छ जतिबेला घरमा एक मात्र हैन दुई वा दुई भन्दा बढी जुम्ल्याह बच्चाको आगमन एकैचोटि हुन्छ ।
समाजमा हामीले जुम्ल्याहा देखेका, भेटेका वा सुनेका छौं। यो कसरी सम्भव हुन्छ? भन्ने जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक हो ।
स्त्री रोग विशेषज्ञको अनुसार नेपालमा ८० जनामा एक जनाको जुम्ल्याहा बच्चा जन्मने गरेको पाइएको छ।
चिकित्सको अनुसार जुम्ल्याहा एउटै डिम्ब र शुक्रकीट मिलन भएर बनेको कोष फुटेर जति टुक्रा हुन्छ, त्यतिवटा बच्चा भएको पाइन्छ । त्यस्तो फुटाइ सात दिनभित्र भएमा जुम्ल्याहा बच्चा छुट्टाछुट्टै विकास हुन्छ। सात दिनभित्र त्यसो भएमा टाँसिएर जन्मने सम्भावना हुन्छ। यसरी जन्मने जुम्ल्याहा प्रायः एउटै लिंगका हुन्छन् भने उनीहरूको अनुहार पनि दुरुस्त देखिन्छ ।
त्यसैगरी, टेष्टुयुब बेबी र आईभीएफ प्रविधि आईभीएफ इनभिट्रो फर्टीलाइजेशन प्रक्रिया अन्तर्गत बच्चा जन्माउँदा अण्डालाई बाअिर फर्टीलाईज गराएर पाठेघरमा हालिन्छ, जसले गर्दा पनि बच्चा जुम्ल्याह हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
गर्भ बस्ने चक्कीको सेवन गर्नाले यो औंषधीको प्रयोग गर्दा महिलाको पाठेघरमा एक भन्दा बढि अण्डा निस्कने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ । जब ती अण्डा लाखौ शुक्रकिटको सम्पर्कमा आाउँछ र ती लाखौं शुक्रकिट मध्ये एक दुईवटा शुक्रकिट उक्त अण्डाको सम्पर्कमा आएर विकसित हुन्छ। जसले गर्दा जुम्ल्याह बच्चा जन्मने सम्भावना बढि हुन्छ।
त्यस्तै, घरमा पहिले नै जुल्याहा बच्चा छन् भने पनि त्यस्ता आमाबाबुबाट जन्मने अर्को बच्चा पनि जुल्ल्याहा हुने सम्भावना धेरै हुने गर्छ । त्यति मात्र होइन, पहिले पनि आमा बनिसकेका महिलाको अर्को सन्तान जुल्ल्याहा हुनसक्छ ।
जुम्ल्याहा गर्भ रहनुको जोखिम
त्यसबाहेक, जुम्ल्याहा गर्भमा समय अगावै डेलिभरी हुने सम्भावना पनि बढी हुने गर्छ। जुन महिलामा दुईटा गर्भ बस्छ, उनीहरूलाई पहिलो तीन महिना धेरै वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने तथा चक्कर लाग्ने गर्दछ । त्यसैैगरी हर्मोन सम्बन्धी परिवर्तन पनि धेरै देखिने गर्दछ तर यसबाट बच्चाको वृद्धिविकासमा भने खासै असर पर्दैन ।
महिनावारी रोकिनासाथ महिलाले सबैभन्दा पहिले गर्भ रहेको जान्न जरुरी हुन्छ। गर्भ रहेको थाहा भएमा ६ देखि आठ हप्ताभित्रमै अनिवार्य अल्ट्रासाउण्ड गर्न जरुरी छ । यसले चारवटा फाइदा गर्छ। पहिलो गर्भ रहेको थाहा हुन्छ। त्यस्तै गर्भको साइज पत्ता लगाउन सकिन्छ।